February 2, 2020 – Medical Sharing
ခဏခဏ ဆူဆူပူပူ လုပ်လို့ အ​မေရင်းကို သားမှဓားဖြင့်​ခုတ်​သတ်​
February 2, 2020 Dr Mrs Mg
အ​မေရင်းကိုသားမှဒါးဖြင့်​ခုတ်​သတ်​ 02.02.2020 Bangkok ထိုင်းနိုင်​ငံရ​ယောင်​မြို့တွင်​မ​နေ့က သားကအ​မေဖြစ်​သူ၏လည်​ပင်းကိုဒါးဖြင့်​အချက်​​ပေါင်းများစွာခုတ်​သတ်​မှု့ဖြင့်​​သေဆုံသွား​ကြောင်းသိရပါသည်​ ဖြစ်​ရခြင်းအ​ကြောင်းရင်းမှာ အသက်​(၁၈)နှစ်​ရှိပြီဖြစ်​​သောသားအ​ထွေးဆုံးမှာ မည်​သည့်​အလုပ်​အကိုင်​မှမလုပ်​​​သဖြင့်​အ​မေဖြစ်​သူမှခဏခဏဆူပူ​ပြောဆို​သော​ကြောင်းစိတ်​မှာမ​ကျေမနပ်​ဖြစ်​​နေရာမှမ​နေ့ကခါတိုင်းကထက်​ပို​ပြောလာသည့်​အတွက်​ ​ဒေါသမထိမ်းနိုင်​၍ အနားမှာရှိ​သောဒါးဖြင့်​အ​မေ၏လည်​ပင်​ကို အချက်​​ပေါင်းများစွာခုတ်​လိုက်​သဖြင့်​အ​မေဖြစ်​သူ​သေဆုံးသွား​ကြောင်းသိရ @ KHM Rakhita news UNICODE အမရေငျးကိုသားမှဒါးဖွငျ့ခုတျသတျ 02.02.2020 Bangkok ထိုငျးနိုငျငံရယောငျမွို့တှငျမနကေ့ သားကအမဖွေဈသူ၏လညျပငျးကိုဒါးဖွငျ့အခကျြပေါငျးမြားစှာခုတျသတျမှု့ဖွငျ့သဆေုံသှားကွောငျးသိရပါသညျ Read more
အဘကို ညတိုင်းရှိခိုးပြီး အိပ်ဖြစ်လို့ ရွှေထုတ်ကောက်ရခဲ့တာဆိုတဲ့ အမျိုးသား
အဘကို ညတိုင်းရှိခိုးပြီး အိပ်လို့ ရွှေထုတ်ကောက်ရခဲ့တာဆိုတဲ့ အမျိုးသား ရန်ကုန်တိုင်း၊သာကေတေမြို့နယ်၊၁၂ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သော ကိုကောင်းမြင့် ဆိုသူသည် ယနေ့ညနေ ရုံးမှအပြန်တွင် ကာလတန်ဖိုး သိန်း ၂၀၀ဝန်းကျင်ရှိသော ရွှေထုပ်တစ်ထုပ်အား အမှတ်မထင် ကောက်ရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကုမ္မဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကောင်းမြင့်သည် သမ္မတကြီး Read more
February 2, 2020 February 2, 2020 Dr Mrs Mg
သင်သိပြီးလျှင် အခြားရွှေမြန်မာတို့သိစေရန်မျှဝေပေးပါ —— ဆရာမောင်(မူဆယ်) မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ရွာတိုင်းတွင် အသင့် ထုတ်ပိုးရောင်းချနေသည့် ကိုရီးယားတုတ်ထိုး ကိုရီးယားဟော့ပေါ့ ဂျပန်ဆူကီယာကီ တရုတ်ဒင်ဆမ်း အမဲသားလုံး ဝက်သားလုံး ကြက်သားလုံး ငါးအသားလုံးများကို တရုတ်ပြည်တွင်း၌ ရောင်းမရသည့် အသားဆိုးများဖြင့် ပြုလုပ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့် Read more
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကုသဖို့ ပထမဆုံး ဆေးကို အမေရိကန် ဆေး ကုမ္ပဏီက ကြေညာလိုက်ပါပြီ
Breaking News === ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကုသဖို့ ပထမဆုံး ဆေးကို အမေရိကန် ဆေး ကုမ္ပဏီက ကြေညာလိုက်ပါပြီ အမေရိကန်အခြေစိုက် ဆေးကုမ္ပဏီ Gilead Sciences က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Remdesivir ဆေးကို U.S.မှာ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် Read more
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာက တရုတ်သူနာပြုတို့ဘဝ မြင်ဖူးအောင်ကြည့်ပီး လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးပါ
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာက တရုတ်သူနာပြုတို့ဘဝ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သူ ၇၇၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၁၇၀ ရှိလာချိန်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာက တရုတ်သူနာပြုတစ်ဦးပုံကိုတရုတ်ဂလိုဗယ်တိုင်းမ်သတင်းက ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့အကာအကွယ်တွေဝတ်ဆင်မှု့နဲ့Mask ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ထားရမှုကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ Mask အရာတွေ ခပ်နက်နက် ထင်ကျန်ရစ်ပုံက တွေ့ရှိရသူတွေ Read more
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖူးရခဲပါတယ် လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ….
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ် ” လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ ၇ရက်အတွင်း အကျိုးပေးလိမ့်မည် မယုံသူများကျော်သွားပါမစော်ကားပါနဲ့ရှင့်…. မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပါ ဖူးရခဲပါတယ်လိုရာဆုကို တောင်းပြီး ပို့စ်ကို ရှဲလိုက်ပါ Read more
ထပ်မံပူးဝင်ပြီး လက်စားမချေရသေးလို့ သာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ မြမြ
ထပ်မံပူးကပ်ပြီး လက်စားမချေရသေးလို့ သာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပြောလာတဲ့ မြမြ မြမြ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဧပြီလ ၁၃ နေ့က ယောက်ျားလေး ၃ ဦးရဲ့ မုဒိန်းကျင့်၊ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်က Read more
မြန်မာကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမှာ နေမကောင်းဖြစ်နေ
မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမှာ နေမကောင်းဖြစ်နေ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ က မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူ (၆၃) ဦးထဲက (၃) ဦးမှာ နေမကောင်းဖြစ်နေပြီး တစ်ဦးမှာ ပတ်စပို့/ဗီဇာမရှိတာကြောင့် (၅၉) ဦးသာ Read more
၀ူဟန်မြို့တွင် ပိတ်မိနေသည့် မြန်မာကျောင်းသား ၅၉ ဦး မန္တလေးမြို့သို့ရောက်ရှိ …
၀ူဟန်မြို့တွင် ပိတ်မိနေသည့် မြန်မာကျောင်းသား ၅၉ ဦး မန္တလေးမြို့သို့ရောက်ရှိ … ဧရာဝတီ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၂၀ တရုတ်နိုင်ငံ ၀ူဟန်မြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပိတ်မိနေသည့် မြန်မာကျောင်းသား ၆၃ ယောက်အနက် နေမကောင်းသူ Read more
တရုတ်နိုင်ငံဟူနန်တွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ် ကြက်အကောင်ရေ ၁၇၀၀၀ ကျော် သုတ်သင်ရှင်းလင်း
တရုတ်နိုင်ငံဟူနန်တွင် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်| ကြက်အကောင်ရေ ၁၇၀၀၀ ကျော် သုတ်သင်ရှင်းလင်း … ပေကျင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဟွန်နန်ပြည်နယ်၊ ရှောင်ရန်မြို့ရှိ ကြက်ခြံတစ်ခုမှာ H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေသည် တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ကျေးလက်ဒေသ၀န်ကြီးဌာနမှစနေနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်)နေ့တွင် ပြောကြားသည်။ Read more